Maimaim-poana ho an'ny vehivavy Mampiaraka toerana miaraka amin'ny vahiny
Ny mpanjifa avy any Alemaina, Aotrisy sy Soisa liana amin’ny Fiarahana amin’ny zazavavy avy any Atsinanana Eoropa ho an’ny famoronana ny fianakaviana sy zava-dehibe tokoa ny fifandraisana. Website fanompoana Mampiaraka dia maimaim-poana tanteraka ho an’ny vehivavy. Ny vohikala dia tsy manolotra na inona na inona ny asa fanampiny, fa izay misaraka sarany mety ho. Ny ankizivavy dia afaka misoratra anarana ao amin’ny habaka amin’ny fipihana eo amin’ny»register», hameno ny endrika sy ny manomboka mitady ho mendrika ny kandidà. Fa ny fahombiazana sy ny fiarovana ny fifandanjana ara-pihetseham-po, dia tsy maintsy mahatsiaro ny fahamarinana tsotra: ny fikarohana ho an’ny olon-tiana iray dia asa fa mitaky fotoana sy faharetana izany. Ny habaka dia mety hanome ny zazavavy sy ny olona ho an’ny tontolo iainana ny Fiarahana. Faly izahay mizara ny zavatra niainany, na ny mamaly ny fanontaniana. Na izany aza, ny fahombiazana dia miankina tanteraka amin’ny ny ezaka atao amin’ny vehivavy sy ny lehilahy mba mety hahita mpiara-miasa. Noho izany dia ilaina ny maka zava-dehibe ny fisafidianana ny sary sy mameno ny fanontaniana. Ny tsipiriany momba ny tombontsoa, ny famantarana ny sehatra fanabeazana sy fahalalana ny amin’ny teny vahiny, hampitombo ny vintana ho mahaliana ny olona. Lehilahy eo amin’ny toerana handoavana ny fahafahana mandefa ny hafatra. Ny manararaotra izany fomba mifototra amin ny zava-misy fa ny olona no tsy overwritten maro ny ankizivavy indray mandeha, ary manao ny safidy tsara, mifototra amin’ny tombontsoa amin’ny fahazoana nahalala ny tovovavy ary rehefa avy nandinika ny fanazavana omena ao amin’ny fangatahana endrika. Izany dia manampy ny olona mba tonga saina hoe tena matotra sy amim-pieritreretana dia maniry ny hihaona amin’ny zazavavy avy any Eoropa Atsinanana. Noho izany antony izany, dia mangataka ny vehivavy mba tsy Maneho fiaraha-miory ho an’ny lehilahy, raha toa izy ireo dia tsy liana amin’ny fifandraisana bebe kokoa aminy sy tsy hamela hafatra tsy misy valiny. Raha ny ankizivavy no tsy liana amin’ny izay nanoratra ny olona, ilainy mba hilaza aminy ny momba izany.
Mba hisarihana ny sain’ny olona, afaka Maneho ny fiaraha-miory, na mandefa hafatra. Ny eoropeana manana toe-tsaina tsara ny ankizivavy dia afaka maka ny dingana voalohany, manomboka ny resaka tenanao. Izany dia manome ny ankizivavy matoky ny masony. tsy chat, ireo mpampiasa ireo nandritra ny fotoana ela an-tserasera, mba ho»nahatsikaritra». Momba ny rehetra ny hafatra sy»tia»ao amin’ny tranonkala mpampiasa dia ampahafantarina amin’ny alalan’ny taratasy amin’ny alalan’ny mailaka sy ny fitsidihana ny toerana mandritra ny fotoana mety. Noho izany indraindray mitaky raha mba hahazoana mamaly ny hafatra na ny fiaraha-miory. Na izany aza, dia manan-danja mba hamaly ny olona ao amin’ny lahatsoratra, ny eritreritsika na amin’ny fomba ara-potoana, dia mety ho ny roa andro taorian’ny fandefasana ny hafatra, ny olona tsy liana amin’ny fifandraisana. Raha toa ka manana fanontaniana manokana, na ny momba ny asa, ny toerana, Dia afaka hifandray ny iray amin’ny mpiasa.
tsy misy fanambadiana ny fahafahana Misafidy
Noho izany antony izany, ny tovovavy izay liana amin’ny fitadiavana mpiara-miombon’antoka ho an’ny fifandraisana matotra, ary mihevitra ny fanambadiana amin’ny vahiny iray amin’ny hetsika manaraka, dia afaka misoratra anarana eto amin’ny tranonkala. Ny fampiasana ny asa fanompoana ho an’ny tovovavy tena maimaim-poana. Mba hisoratra anarana dia tsy maintsy mifidy»fisoratana anarana maimaim-poana». Avy eo dia hiseho ny endrika fa ny mameno: tokony mamaritra ny anarana, toerana honenana, daty nahaterahana, mampakatra ny mombamomba ny sary, ny mamaritra ny tena adiresy mailaka. Rehefa manindry»Anarana»ao amin’ny manokana ny adiresy e-mail dia hahazo mailaka mba alefaso ny mombamomba azy. Ity taratasy ity dia ny manaraka ny votoaty: ny anarana, ny teny miafina (ny tenimiafina azo ovana ao amin’ny mombamomba ny toe-javatra) sy ny rohy hampavitrika ny mombamomba azy. Araho ity rohy ity, raha tsy izany dia tsy ny mombamomba, dia tsy ho ampy ho an’ny lehilahy sy ho voafafa ao anatin’ny efatra amby roapolo ora. Raha toa ka tsy mahita ny mailaka ao amin’ny Inbox, jereo ny laha-tahiry»amin’ny Spam». Raha misy olana mipoitra amin’ny fanamafisana ny mombamomba azy, mifandray ny helpdesk na ny mailaka. *Ny olona eo amin’ny tranonkala dia liana amin’ny fitadiavana mpiara-mitory ho an’ny fifandraisana matotra, ka ny matoky lafin-javatra sy ny fahamarinan ny fanazavana omena dia tena zava-dehibe ho antsika. Noho io antony io, iangaviana milaza ny tena anaranao. Mombamomba amin’ny anaram-bosotra sy virtoaly anarana ho voasakan’ny toerana fitantanana. Izany fitsipika izany dia mihatra amin ny hafa voalaza vaovao.
Misaotra Anao izahay noho ny fahazavan-tsaina
Tsy»sendra»nisoratra anarana (anisan’izany ny fisoratana anarana ny mpampiasa, izay tanjon’ny fihaonana dia tsy mampisalasala na dia tsy lehibe) ny fitantanana ny toerana mamoaka afa-tsy tò ny mombamomba. Izany fitsipika izany dia mihatra ny mpampiasa rehetra tsy an-kanavaka. Dia miraharaha ny momba Ny fiarovana sy te-hiaro Anao amin’ny fahadisoam-panantenana. Taorian’ny nahazoany ny adiresy mailaka, ny fanadihadiana dia namoaka tao amin’ny tranonkala ao anatin’ny efatra amby roapolo ora aorian’ny fitiliana avy amin’ny mpitantana. Rehefa vita ny fanamarinana ny adiresy mailaka voalaza, dia ho nandefa mailaka fampahafantarana ny famoahana ny fanontaniana ao amin’ny tranonkala. Raha toa ka toerana mpiasa dia misy fanontaniana, isika hifandray Aminao eo amin’ny adiresy mailaka voalaza. Nandritra izany fotoana izany, Tsy afaka mijery ny mombamomba ny olona, manova ny mombamomba azy, na izany aza, ny endri-javatra ny toerana dia ho Anao voafetra ihany. Midika izany fa Ianao dia tsy ho afaka hanoratra ny lehilahy na ny hampiseho azy ireo ny fiaraha-miory. Raha miandry isika, dia milaza ny familiarize ny fitsipika, ny asa sy ny endri-javatra ao an-toerana, izay dia voalaza amin’ny antsipirihany ao amin’ny fizarana ny tena sakafo»ny Fomba fiasan’izy». Mba hahazoana mahafantatra tsara ny olona avy any Alemaina Mampiaraka maimaim-Poana ho an’ny vehivavy toerana Fiarahana iraisam-pirenena Mampiaraka toerana
← Filipiana ankizivavy Skype ho maimaim-poana amin'ny chat velona, mivantana na lahatsary firesahana amin'ny fakan-tsary
Malaza Mampiaraka Brezila, ny manan-tsaina Mampiaraka Brezila Niaraka Lahatsary →